सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्ड: विशिष्टता, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात | ग्याजेट समाचार
ईडर एस्टेबान | | सामान्य, टेलिफोनी
सामसु Un अनप्याक्ड घटनाले हामीलाई धेरै समाचारहरू छोड्दैछ। कोरियाली फर्मले आफ्नो नयाँ उच्च-अन्तका स्मार्टफोनहरू प्रस्तुत गरिसक्यो। यी मोडेलहरूको बीचमा हामी ग्यालक्सी फोल्ड फेला पार्दछौं, ब्रान्डको पहिलो फोल्डिंग स्मार्टफोन। एक फोन जुन हामीले महिनौंदेखि अफवाह सुन्दै आएको छ र यो अन्ततः आधिकारिक भएको छ। हामीलाई फोन पूर्ण रूपमा थाहा छ।
यो ग्यालक्सी फोल्ड बजार मा पहिलो तह मोडेल बन्छMWC मा पुग्ने अन्य मोडेलहरूमा नेतृत्व लिदै। यो सामसु .को लागि ठूलो चुनौती हो। दायराको शीर्ष जुन रमाईलो डिजाइनको साथ आउँदछ। हामी यो उपकरणबाट के आशा गर्न सक्छौं?
यी पछिल्ला दिनमा, उपकरणको फोटोहरू चुहावट भयो, थप यसको विशिष्टताहरू केहि। यसैले हामी यसको बारेमा पहिले नै विचार प्राप्त गर्न सक्छौं। अन्तमा, सान फ्रान्सिस्कोको यस सामसु event कार्यक्रममा हामी ब्रान्डको यो लामो-प्रतीक्षित फोल्डिंग स्मार्टफोनको बारेमा सबै कुरा सिक्न सक्छौं।
1 निर्दिष्टीकरण सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्ड
2 ग्यालक्सी फोल्ड: सामसु'sको फोल्ड स्मार्टफोन वास्तविक छ
निर्दिष्टीकरण सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्ड
सामसुले एन्ड्रोइड बजारमा आफ्नो अग्रणी स्थिति फिर्ता लिनको लागि सेट गरिसकेको छ, जुन हुवाइ जस्ता ब्रान्डको प्रगतिले बढ्दो खतरामा छ। तसर्थ, यस वर्ष उनीहरूले हामीलाई आफ्नो दायरा नवीकरण गरेर छोड्छन्। पहिलो कदम पहिले नै यो नयाँ ग्यालक्सी फोल्डको साथ लिइएको छ। यसको पूर्ण विवरणहरू हुन्:
प्राविधिक विशिष्टता सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्ड
मोडेल ग्यालेक्सी तह
अपरेटिङ सिस्टम एक यूआईको साथ एन्ड्रोइड Pie पाई
स्क्रिन 4.6 इंच HD + सुपर AMOLED (२१:)) भित्री डिस्प्ले र -..21 इन्च QXGA + गतिशील AMOLED (9.२:)) इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले
प्रोसेसर Exynos 9820 / स्नैपड्रागन 855
राम 12 जीबी
आन्तरिक भण्डारण 512१२ जीबी यूएफएस ..०
रियर क्यामेरा १ MP MPf/ २.२ अल्ट्रा-वाइड ए angle्गल १२ MP डुअल पिक्सेल चौडा कोण vari चर अपरचरf/ १.--f / २.16 र अप्टिकल छवि स्टेबलाइजर + १२ MP टेलिफोटो लेन्स दुई-म्याग्निफिकेशन अप्टिकल जूम रf/ २.२ अपर्चरको साथ
अगाडिको क्यामरा १० MPf/ २.२ + Me मेगापिक्सेलf/ १.10 गहिराई सेन्सर र १० MP MP / /.२२ कभरमा।
कनेक्टिविटी ब्लुटुथ .5.0.० A-GPS GLONASS Wifi 802.11०२.११ ac USB-C 3.1.१
अन्य सुविधाहरू साइड फिंगरप्रिन्ट रिडर कम्पास जिरोस्कोप NFC
ब्याट्री 4.380 mAh
मूल्य 1980 डलर
ग्यालक्सी फोल्ड: सामसु'sको फोल्ड स्मार्टफोन वास्तविक छ
यी महिनाहरूमा यस फोनको बारेमा धेरै अनुमान पछि, यो वास्तवमा वास्तविक भएको छ। दायराको शीर्ष एन्ड्रोइड बजार क्रान्ति गर्न बोलाउँदछ। यस ग्यालक्सी फोल्डको विचार भनेको एक उपकरणको लागि सक्षम हुनु हो जुन सबै प्रकारको परिस्थितिमा अनुकूलन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। फोल्ड गर्दा यो हातको हत्केलामा समात्न सकिन्छ र खोल्दा, तपाईं उत्तम तरिकाले भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
सामसु्गले यस ग्यालेक्सी फोल्डलाई एकको रूपमा परिभाषित गरेको छ एक उपकरणमा स्मार्टफोन, ट्याब्लेट र क्यामेरा। यस मोडेलको लागि राम्रो वर्णन। मल्टिटास्किंग उपकरणमा आवश्यक छ, प्रस्तुतीकरणमा देखाईए जस्तै। त्यसकारण, सामसु Samsung्गले ट्याब्लेट मोडमा प्रयोग गरेको बेला एकै समयमा तीन अनुप्रयोगहरू खोल्न अनुमति दिनेछ। जसले तपाइँलाई एकै समयमा उपकरणमा सजिलैसँग सबै भन्दा महत्वपूर्ण अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिँदछ।
यो सम्भव हुनको लागि, सामसुले गुगल र माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरूसँग काम गरिसक्यो यस प्रक्रियामा। फोनमा यस मल्टिटास्किking गर्न यसले धेरै सजिलो बनाउँदछ। थप रूपमा, प्रयोगकर्ताले प्रत्येक विन्डोमा प्रयोग गर्न चाहेको आकार निर्धारण गर्न सक्षम हुनेछ। त्यसोभए तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ठूला व्यक्तिहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुनामा मात्र तान्न आवश्यक छ। बहु-सक्रिय विन्डो पनि प्रस्तुत गरिएको छ, जसले गर्दा अनुप्रयोगको सामग्री स्थिर रहन मिल्छ यदि हामी जहिले पनि उपकरणलाई मोड्छौं वा उल्टो गर्दछौं भने पनि। यस सन्दर्भमा धेरै सहज छ।
ग्यालक्सी फोल्ड कुल छ क्यामेराको साथ आउँदछ, यसको प्रस्तुतीकरणमा सामसु byद्वारा पुष्टि गरिएको। पछाडि तीन क्यामेरा, दुई भित्री भित्र र एक अगाडीमा। त्यसैले तपाईंसँग आफ्नो फोनको साथ प्रत्येक कोणको लागि क्यामेरा छन्। फोटोग्राफीले उपकरणमा विशेष प्रासंगिकता प्राप्त गरेको छ। त्यसैले हामी कुनै पनि समस्या बिना यसको साथ कुनै कोणबाट फोटो लिन सक्दछौं। तिनीहरू सबै प्रकारका सेन्सरहरू मिलाउँछन्, जस्तै फराकिलो कोण र टेलिफोटो। त्यसैले हामी यस उपकरणको साथ सबै प्रकारको स्थितिहरूमा फोटोहरू लिन सक्छौं। कुनै श doubt्का बिना यसको एक शक्ति।
ब्याट्री फोनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष थियो। किनकि ग्यालेक्सी फोल्ड जस्तो मोडेलमा ब्याट्री घुसाउन गाह्रो छ, जुन घुम्छ। तसर्थ, सामसुले एक डबल ब्याट्रीको रोजेको छ। यसको कुल क्षमता 4.380 एमएएच छ। त्यसोभए त्यहाँ उपकरणको लागि सबै भन्दा राम्रो स्वायत्तता छ। यसमा द्रुत चार्जको उपस्थितिमा हामीसँग यस समय विवरणहरू छैन।
एक पटक कोरियाली ब्रान्डको यो उच्च-अन्तको बारेमा सबै विवरणहरू ज्ञात भए पछि, यो कहिले थाहा हुन्छ कि यो कहिले मार्केटमा सुरु हुन्छ। यस ग्यालेक्सी फोल्डको बजारमा यी महिनाहरूमा प्रक्षेपणको बारेमा धेरै हल्लाहरू छन्। तर अन्तमा यो जानकारी आधिकारिक रूपमा थाहा छ।
यस उच्च-अन्तको मूल्यको बारेमा त्यहाँ धेरै हल्लाहरू छन् र टिप्पणीहरू। हामीलाई थाहा थियो कि यो सस्तो स्मार्टफोन हुनेछैन। तर भाग्यवस, हामीसँग डेटा छ जुन यस सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्डको मूल्यको बारेमा हामीलाई बढी बताउँछ। यो वा यो अपेक्षा भन्दा अधिक महँगो छैन?
घटना मा सिके पछि, हामी गर्न सक्छौं expect १,। .० बाट मूल्य अपेक्षा यो उच्च-अन्तमा। तिनीहरू १,1.750० युरो बदल्नको लागि छन्, यद्यपि यूरोको मूल्य अझ पक्का भएको छैन। यो कोरियाली ब्रान्डको अहिलेसम्मको सबैभन्दा महँगो स्मार्टफोन बन्यो। यसको सुरुवात अप्रिल २ 26 मा आधिकारिक रूपमा हुनेछ। त्यसोभए तपाईले केही महिना प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ जबसम्म यो स्टोरहरूमा जान सक्दैन। यो आशा गरिन्छ कि यो छिट्टै नै रिजर्भ गर्न सक्षम हुनेछ।
यो चार रंगमा उपलब्ध हुनेछ: निलो, सुन, कालो र चाँदी। प्रयोगकर्ताहरूले बेजेलको क्षेत्र अनुकूलन गर्न सक्दछन् जहाँ उपकरण मोटेको छ। त्यसोभए फोनको यस क्षेत्रमा उनीहरूले चाहेको र choose्ग छनौट गर्न सक्दछन्। निस्सन्देह यो केहि पनि अधिक प्रीमियम र विशेष बनाउँछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » यो ग्यालेक्सी फोल्ड हो, सामसु'sको फोल्ड स्मार्टफोन
रेन्डी जोस भन्यो
तपाईं छिटो एक्सडी हुनुहुन्छ
र्यान्डी जोसलाई जवाफ दिनुहोस्